Okokugqibela, iApple ifumana imvume kwiziko ledatha eIreland | Ndisuka mac
Okokugqibela, iApple ifumana imvume kwiziko ledatha laseIreland
Kuyo yonke izolo, Ekugqibeleni iApple yafumana imvume yokwakha kunye nokuvula iZiko ledatha elitsha eIreland, emva kokuphumelela ngempumelelo umngeni osingqongileyo kwezomthetho abajongane nawo ngenxa yezikhalazo ezivela kubahlali baseIreland bendawo.
INkundla ePhakamileyo yaseIreland yagweba ukuba eli Ziko leDatha litsha licetywayo yinkampani yaseNyakatho Melika kwaye lacwangciswa ukusukela ngoFebruwari 2015, lingenziwa ngokuqinisekileyo ngaphandle kwenkxalabo eyahlukeneyo yendawo esihlala kuyo.
Iindaba ekuqaleni kwale veki bezizizo abanye abahlali bachasene nokusekwa kwale nkampani esekwe eCupertino. Bazama ukumisa ukwakhiwa kwayo, besithi imvume efunyenwe yinkampani yelinye ilizwe ayisebenzi.
Nangona kunjalo, izolo ukwakhiwa kweziko ledatha elitsha le-Apple kuye kwavunywa ngokuqinisekileyo, ecetywayo kwi-County Galway, kwintshona ye-Ireland, eqikelelwa ukuba ingabiza malunga ne-1.000 yezigidigidi zeedola.
Ngalesi sigwebo sisekela ilizwe lonke, kuyabonakaliswa ukuba uphononongo lwenziwe ngokuchanekileyo kwaye akubangakho mbono wongezekileyo kokusingqongileyo kolunye luchazwe kwizifundo esele zichaziwe. Xa uApple kutshanje wacela ukukhawulezisa ityala, wayenethemba lokuba le nkqubo yezomthetho iza kugqitywa ngokukhawuleza ukuqala ngaphambi kokuphela konyaka ngokwakhiwa kwayo.
Kwangelo xesha iziko ledatha laseIreland labhengezwa ngo-2015, enye yabhengezwa kwakhona ngeDenmark. Eli ziko kulindeleke ukuba liqale ukusebenza ekupheleni kwalo nyaka ka-2017.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Okokugqibela, iApple ifumana imvume kwiziko ledatha laseIreland
Ziphephe iividiyo kunye nee audios zewebhusayithi ozindwendweleyo ekubeni zidlalwe ngokuzenzekelayo
Ulwazi ngezothutho lukawonkewonke eTaiwan ngoku luyafumaneka kwiApple Maps